WYD Macnaha: Maxaa Kumbuyuutarku u taagan yahay
Waa maxay WYD dhab ahaantii macnaheedu?
Sidee looga jawaabaa marka qof qorto "WYD" adiga
Weligaa ma heshay farriin qoraal ah ama fariin ah oo lagu waydiiyo: "WYD?" Haddii aadan aqoon u laheyn sadexda waraaqood oo ka kooban buug yar oo gaar ah , waxaa laga yaabaa inaadan garanayn sida saxda ah ee looga jawaabayo.
WYD waxaa loola jeedaa in loo isticmaalo su'aal, taas oo u taagan:
Haddii aan si fiican u isticmaali lahayn naxwe ahaan, halkan si sax ah ayaa loo waydiin karaa su'aashan, "maxaad samaynaysaa?" Laakiin maaddaama internetka iyo isticmaalayaasha casriga ah ee loo yaqaanno in ay si sax ah u isticmaalaan naxwaha iyo higgaadinta xawaaraha iyo sahlan, qaadashada su'aal caadi ah oo sidan oo kale ah oo ka tagaysa ereyga waxay u noqotaa mid qalqal ah oo u muuqda mid dhawaaqaya oo casri ah.
Sidee loo isticmaalaa WYD
Mid ka mid ah siyaabaha ugu cad cad dadka isticmaala WYD waa iyada oo u hogaamineysa su'aal qof qof si isku mid ah ay u la socdaan wada hadal dhab ah oo fool-fool ah. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa su'aallo taagan oo ah in la bilaabo wada-hadal cusub ama si loo helo mowduuc ka hadlaya mawduuc wadahadal ah.
Maadaama ay WYD tahay su'aasha ugu habboon ee loo isticmaalo wadahadal dhab ah oo diirada lagu saarayo xog ururin ku saabsan waqtigan xaadirka ah, waa caadi in la arko iyada oo loo isticmaalo fariimaha qoraalka ama fariimaha fariimaha deg dega ah . Inkastoo laga yaabo inaad aragto "WYD"? su'aasha laga waydiiyay bogga Twitter, Facebook ama shabakadaha kale ee bulsheed , waa midka ugu muhiimsan ee wada shaqsiyaadka gaarka ah, wada hadalka waqtiga dhabta ah.
Marka laga reebo xeerku waa marka WYD loo isticmaalo si qalad ah markaad faallo ka bixineyso dhacdo ama xaalad. Xaaladdan oo kale, isticmaalka WYD wuxuu ka mid noqonayaa hadal guud oo ah halkii su'aal loo jeedin lahaa qof waxaana laga yaaba in lagu arko casriga xaaladda iyo sidoo kale faallooyinka ka tagay shabakadaha bulshada.
Tusaalaha sida loo isticmaalo WYD
Saaxiib # 1: "Wyd?"
Saaxiib # 2: "Nm kaliya chillin"
Tusaalaha ugu horreeya ee kor ku xusan, Saaxiibka # 1 wuxuu isticmaalaa gaabinta sida habka qofku u weydiin karo "waxaad samaynayso" ama "maxaad samaynaysaa?" in wada sheekeysi fool-fool ah. Saaxiibka # 1 wuxuu astaan ​​ahaan isku deyayaa inuu ururiyo macluumaadka laga helo saaxiibka # 2, kaas oo ka jawaabaya xarfo kale oo "nm", oo "wax badan".
Saaxiib # 1: "Wyd ka dib dugsiga berri?"
Saaxiib # 2: "Prob aadaya jimicsiga"
Inkasta oo cinwaankani inta badan loo isticmaalo su'aasha taagan, waxa kale oo loo isticmaali karaa qayb ka mid ah su'aal dheer, sida ku cad tusaalaha labaad ee kore. Tusaale ahaan, Saaxiibka # 1 wuxuu sheegaa inay doonayaan inay ogaadaan waxa saaxiibka # 2 uu sameynayo mustaqbalka waqti ka dambeeya.
"Broorkaydu waxay adeegsadeen subaxdii oo dhan, ka dibna ka tagay ka hor inta aanan toosin ... nin aan qabin"
Tusaalaha saddexaad ee kor ku xusan, waxaanu heleynaa sida loo eego sida WYD loo adeegsan karo su'aashaha khaldan oo qayb ka ah faallooyin ama hadal ku saabsan wax. Waa cad in qofku u diro xaaladdaan / faalladiisa ama u diro fariin fariin ah ma aha mid toos ah udifaacda sida su'aasha qof kale sida haddii raadineysa jawaab. Taa baddalkeeda, waxay u isticmaalayaan inay muujiyaan jaahwareerkooda iyo khasaare ku saabsan dhacdo dhacay.
Maxay tahay farriinta?
SMTP gudaha gudaha
Waa maxay cinwaanka iimeyga? Sida loo Helo
Dadka aan la garaneynin ee ka yimid Rasuulka Yahoo! Boostada
Sidee loo Isku Diiwaangaliyaa Warbaahinta Wii U ee Wareegtada Warbaahinta Plex
Noocyada Samsung TV Apps
Waa maxay POST?
Sida loo doorto SSD, Hybrid ama Hard Drive Drive
Imisa Qiimaha Ciyaartoyda Blu-ray Discs?
Sida loo furo taleefanka Samsung ee bilaash ah
Waa Maxay Universal App?
Waa maxay Vision Vision Vision?
Ujeedada iyo isticmaalka ugu fiican ee Sans Serif Font
OPPO Digital BDP-103 3D Sawirada Blu-ray Disc Player Sawirada
Maxay Tahay LTE?
Wicitaan Gaar ah oo Gaar ah
Sida Loo Abuuro, Loo Beddelo oo Loo Isticmaalo Dukumentiyada Microsoft Excel ee Bilaash ah
ASRock Fatal1 Gaming-ITX / ac
Barnaamijka ugu wanaagsan iPhone ee loogu talagalay indhoolaha iyo indhoolayaasha
Samee jaantus Excel ah adoo isticmaalaya Fureyaasha Furan